တစ်ဦးက သာ. ကောင်း၏ Is ဘယ် Vietcom ဘဏ်သို့မဟုတ် Bao Kim က? ပိုက်ဆံအပ်ငွေ ExpertOption - က ISO
Vietcom ဘဏ်မှသင်၏ ExpertOption အကောင့်ငှဖို့ကိုလမ်းညွှန်
သင် ExpertOption platform ပေါ်တွင်တစ်ဦးဗီယက်နမ်နေထိုင်သူနှင့်ကုန်သွယ်နေလျှင်, သင်သုံးနိုငျအများအပြားလက်ခံနိုင်သောငွေပေးချေမှုရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။ သူတို့ထဲမှတစ်ဦး Vietcom ဘဏ်ဖြစ်ပါတယ်။ ExpertOption အတူ Vietcombank အကောင့်ကို အသုံးပြု. ၏အားသာချက်များတစ်ခုမှာသင်ကအမြတ်အစွန်းကိုဖန်ဆင်းပါတယ်တခါ, ထုတ်ယူ e-ပိုက်ဆံအိတ်အကောင့်စေနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ -ပိုက်ဆံအိတ်ငမှထုတ်ယူများသောအားဖြင့်ပိုမိုမြန်ဆန်လုပ်ငန်းများ၌နေကြသည်။
Vietcom ဘဏ်အရောင်းအများအတွက်လိုအပ်ချက်များအောင်မြင်မှုရရန်သင်သည် ExpertOption ရန်သင့် Vietcom ဘဏ်များထံမှရန်ပုံငွေများလွှဲပြောင်းနိုင်မီ, သငျသညျပထမဦးဆုံးမှတ်ပုံတင်ရန်နှင့်သင့်အကောင့်အွန်လိုင်းဘဏ်စနစ်ဘို့အတည်ပြုရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျ ACB, Sacombank သို့မဟုတ် Viettinbank ကဲ့သို့ကွဲပြားခြားနားသောဗီယက်နမ်အခြေစိုက်ဘဏ်ထဲကနေအကောင့်တစ်ခုကိုသုံးရန်ရည်ရွယ်ပါက, လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပိုမိုသို့မဟုတ်လျော့နည်းအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျအခကျအခဲရှိပါကအောက်ပါမှတ်ချက်ထားခဲ့ပါနဲ့ကျွန်မဘယ်မှာဖြစ်နိုင်ပါကကူညီရန်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
ACB, Viettinbank, Sacombank သို့မဟုတ် BIDV ကဲ့သို့အခြားဘဏ်များအဘို့အသငျသညျအတူတူလုပ်ပါ။ အကောင်အထည်ဖော်မှု၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်မဆိုကျန်ရှိသောပြဿနာများအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမှတ်ချက်ပေးရန်အခမဲ့ခံစားရပါ။ PS: Vietcombank နှင့်အတူ depositing အခါ, ပိုက်ဆံကျွမ်းကျင်သူ Option ကိုဆုတ်ခွာလာသောအခါသင်တို့ကိုလည်းက e-ပိုက်ဆံအိတ်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ကြကုန်အံ့။ ကံကောင်းပါစေ!
ဗီယက်နမ်ကုန်သည်များအဘို့အ Bao ကင်မ်သုံးပြီးသင့်ရဲ့ ExpertOption အကောင့်ငှဖို့ကိုလမ်းညွှန်
Bao ကင်မ် ExpertOption e-ပိုက်ဆံအိတ်ထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဗီယက်နမ်ကုန်သည်များကသူတို့၏ကုန်သွယ်ဖို့ပိုက်ဆံငွေသွင်းဖို့သုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြု
အကောင့်။ သင်တစ်ဦး Bao Kim ကအကောင့်ရှိပါက, သင့်ကုန်သွယ်အကောင့်ဖွင့်ထိပ်ဆုံးဤအဆင့်များအတိုင်းဆောင်ရွက်:
လုပ်ဖို့ပထမဦးဆုံးအရာဟာစစ်မှန်တဲ့ ExpertOption ကုန်သွယ်အကောင့်ဖွင့်
ဖွင့်လှစ်သည်နှင့်တပြိုင်နက်, သင့်ကုန်သွယ်အကောင့်ကိုသွားနှင့်သင့် screen ၏လက်ဝဲဘက်အပေါ်ဘဏ္ဍာရေး '' icon ကို click
ထို့နောက်သိုက် '' option ကို click လုပ်ပါ။ ဤသူသည်သင်တို့ကိုသုံးနိုင်သည်ရှိသမျှကိုလက်ခံခဲ့သည်ငွေပေးချေမှုနည်းစနစ်များဖေါ်ပြခြင်းပြတင်းပေါက်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။
ကို Select လုပ်ပါ Bao Kim က သငျတို့သသှေချင်သောငွေပမာဏကိုရိုက်ထည့်ပါ
သင်သည်သင်၏လက်ျာဘက် checkbox ကိုကလစ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့ရဲ့သိုက်ဆုကြေးငွေအရသို့မဟုတ်မရွေးချယ်နိုင်ပါ။ ပေးထားသောအဆိုပါဆုကြေးငွေပမာဏကိုသင်ရှိသည်အကောင့်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်။
ကို 'ကိုဆက်လက်ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ဒါဟာသင့်ရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ငွေပေးငွေယူဖြည့်စွက်ပါလိမ့်မယ်ရှိရာ Bao Kim ကငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်မှသငျသညျသို့ပြောင်းသွားသည်။
Tags: ဘဏ် Bao Kim Loi, Bao Kim, expert option, expert option ပှဲစား, expert option ကုန်သွယ်, expert option ကုန်သွယ်ပြန်လည်သုံးသပ်, is expert option legit, vietcom ဘဏ်, vietcom ဘဏ်လဲလှယ်, vietcom ဘဏ်ငွေလဲနှုန်း, vietcom ဘဏ်တည်နေရာ, ဘယ်မှာလဲ expert option ထောက်ခံ